Famaranana ny Atrikasa hijerena paikady mahomby sy maharitra mahakasika ny tsy fandriampahalemana | Primature
Famaranana ny Atrikasa hijerena paikady mahomby sy maharitra mahakasika ny tsy fandriampahalemana
Mahazoarivo, 10 Aprily 2018 – nofaranan’ny Praiminisitra, Mahafaly Solonandrasana Olivier tamin’ny fomba ofisialy ny Atrikasa mahakasika ny fandriampahalemana izay natao nandritra ny roa andro teto Mahazoarivo.
Nisy ny hafatra maromaro izay nomen’ny Lehiben’ny Governemanta tamin’ireo mpizaika nandritra ny famaranana. Ilaina hoy izy ny fahavononana. « mila resy lahatra fa azo atao ny miady amin’ny tsy fandriampahalemana. Mila resy lahatra fa tanjona iray no iaingana. Mety samy manana ny tombontsoany fa rehefa mijery tombontsoa ambonin’ny firenena dia tokony tanjona iray no jerena. Tokony ho resy lahatra fa hahazo vokatra tsara sy misy fiantraikany mivantana amin’ny fiainan’ny vahoaka. Raha mbola misy ny Malagasy mandry tsy lavo loha dia mbola tsy tratra ny tanjona. Ny vokatra mipaka mivantana amin’ny vahoaka no tanjona. ».
Anisany nanafaran’ny Praiminisitra ihany koa ny fananana fahasahiana manova. Nanantintrantitra ny tenany amin’ny fahasahiana manova ny tsy mety sy ny fahasahiana mandray andraikitra ary tsy hifampiandriandry. “Sahia mandray andraikitra. Aza mifampiandriandry, aza mifanilika andraikitra”.
Nohamafisiny ihany koa ny tsy tokony hananana toe-tsaina mitongilana. “ialao ny kiantranoantrano fa manimba zavatra. Ny fomba tsara ialana amin’ny toe-tsaina tsy mitogilana dia ny fanajana ny lalàna manan-kery” hoy ny Lehiben’ny governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier.
Eo ihany koa ny fampijanonana ny zavatra tsy mety. “Aoka hanao fiaingana vaovao. Mila miara miasa isika. Ny fijerena ny tanjona iray no ahafahana mamaha ny olana. Ampiasao ny toe-tsaina feno firaisankina.”